डीभी परेका नेपाली अमेरिका जान नपाउने — Harpraharnews.com
डीभी परेका नेपाली अमेरिका जान नपाउने
२० असार २०७७, शनिबार हरप्रहर न्यूज
काठमाडौं, २० असार । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आप्रवासीहरूलाई सन् २०२० को अन्त्यसम्म नै प्रवेशमा रोक लगाएपछि डीभी लोटरी परेका नेपाली पनि अमेरिका जान नपाउने भएका छन् ।
सन् २०२० को अन्त्यसम्मका लागि कामदार भिसा र अधिकांश आप्रवासी भिसामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमार्फत रोक लगाएपछि सन् २०२० का लागि डिभीमा छनौट भएका नेपालीहरूले पनि भिसा नपाउने भएका हुन् ।
उनीहरुले आगामी सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्मा भिसा पाइसक्नुपर्ने नियम रहेकोमा डिसेम्बरको अन्त्यसम्म लगाएको आप्रवासन रोकले भिसा नपाउने निश्चित भएको छ । सेप्टेम्बरसम्म भिसा नपाएपछि सन् २०२० को डिभी समाप्त हुने नियम रहेको छ । डीभी लोटरीका लागि भिसा फर्म भरेर अन्तरवार्तामात्र कुरेकाहरुको भिसा शुल्क के हुने भन्नेबारे केही बताइएको छैन ।
सन् २०२० मा ३ हजार ६९६ जना नेपालीलाई डीभी लोटरी परेकोमा १ हजार ६९ जनाले भने भिसा प्राप्त गरिसकेका थिए । सन् २०२१ को डीभीका लागि छनौट भएकाहरुले पनि आउदो जनवरीअघि भिसा नपाउने भएका छन् ।
देउमाई नगरपालिकामा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित भेटियाे
नेपालमा कोरोना संक्रमितको सख्या १५ हजार ४९१ पुग्यो
वडास्तरीय महिला फुटबल प्रतियोगिताको उपाधी वडा नं. ६ लाई
माङसेबुङमा सञ्चालित फुटबल प्रतियोगिताको उपाधी वडा नं. ३ लाई
मन्त्री राना माङसेबुङ आउदै
दमक नगरभित्रका सबै विद्यालयहरु ७ दिनका लागि बन्द
माङसेबुङमा जारी वडास्तरीय फुटबल प्रतियोगितामा वडा नं. ३ फाइनल प्रवेश
डा. शरदचन्द्र राईले स्थापना गरेको कोषमार्फत पाँच जना सम्मानित